Iiglasi zeApple AR zicotha ukukhula kwazo ngokweDigiTimes | Ndisuka mac
Iiglasi ze-Apple ze-Apple zicothisa ukukhula kwayo ngokweDigiTimes
Into malunga nokwandiswa kweglasi ye-Apple ivakala ngokufana okanye imbi nangakumbi kunamahemuhemu esasinawo malunga neAirTags. Ubuncinci bokugqibela sele bukhona, abasebenzisi bazakuqala ukubamkela kule veki kodwa kwimeko yeiglasi zeApple ngoku kukho amarhe amatsha asungulwe yiDigiTimes kwaye kamva apapashwa kwimidiya enje MacRumors, ilumkisa ngokulibaziseka kwayo ekuphuhliseni iiprototypes zezi glasi zibukhali.
Kubonakala ngathi iiglasi zokwenyani ze-Apple kufuneka zingene kwisigaba sesibini sophuhliso kwezi nyanga, ngakumbi inyanga kaJanuwari kwakuthethwe ngayo njengokuqala kwesi sigaba. Ngoku ngolwazi abenakho ukulufumana kupapasho lwaseTaiwan iiglasi zisamile nkqo kwinqanaba lokuqala lokukhula kwazo.
Oku kuthetha ukuba ukubakho kokuqala kokuveliswa kweiglasi ekucingelwa ukuba kucwangciselwe ikota yokuqala yonyaka ka-2022 kuyakulibaziseka. Le yiprojekthi yexesha elide kwaye kubonakala ngathi kuya kufuneka ihambe ngamanqanaba ahlukeneyo ngokweemodeli zohlobo oluthile. Iingxelo ezahlukeneyo zosasazo zithanda Bloomberg, wathi ezi glasi ziya kukhutshwa phakathi ukuya ngasekupheleni kuka-2022. Ewe kubonakala ngathi yiprojekthi yezona zibalulekileyo kwiApple kwaye ziqala ukuba zihlebe kwixesha elide.
Kukho iimodeli ezininzi ezithi zihlebe malunga noku Iiglasi ezikrelekrele ze-Apple zombini ziyinyani kunye neyona nyani. Zombini ezi projekthi ziya kuthatha indlela yabo kunye namanyathelo abo okuqala ukuvelisa, ke asikholelwa ukuba banokubonakala kulo nyaka kwaye ingeyiyo eyokuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Iiglasi ze-Apple ze-Apple zicothisa ukukhula kwayo ngokweDigiTimes
I-watchOS 7.4 ekhoyo equka ukuvula i-iPhone xa unxibe imaski
Isandla seFate 2 umdlalo ofumaneka simahla ixesha elilinganiselweyo